Mareykanka oo ballanqaaday inuu sii xoojinayo xiriirka Soomaaliya | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Mareykanka oo ballanqaaday inuu sii xoojinayo xiriirka Soomaaliya
Mareykanka oo ballanqaaday inuu sii xoojinayo xiriirka Soomaaliya
Sida ay sheegtay safaaradda uu Mareykanka ku leeyahay Muqdisho, Dowladda Mareykanka waxa ay sii adkeyneysaa xiriirka ay la leedahay Soomaaliya iyada oo taageereysa nabadeynta gobolka Geeska Afirka.
Dhambaal Hanbalyo ah oo ay soo dirtay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho kuna aadan 60 sano guuradii ka soo wareegtay xornimada Soomaaliya ayay safaaraddu ku sheegtay in ay ka go’an tahay la shaqeynta madaxda Iyo shacabka Soomaaliyeed si loo dhiso mustaqbal rajo leh iyada oo la marayo wadahadal wadashaqeyn iyo mideynta hadafka iyo halka loo socdo.
“Waa muhiim in aynu dib u milicsanno iskaashigeenni adkaa lixdankii sano ee la soo dhaafay, Soomaaliya wax ay sameysay horumar la taaban karo sidoo kale wax ay la kulantay dhibaatooyin iyo caqabado aan la rumeysan karin. Inkasta oo ay caqabadahaa jireen hadana qiyamka aynu wadaagno ayaa isku keen soo dhoweynaya” ayay tiri safaaradda Mareykanka.
Safaaradda Mareykanka ayaa sheegtay in Raiisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmarke uu ahaa saldhigga Xiriirka saaxiibtinimada ee u dhexeeya labada dal kadib booqashadiisii rasmiga aheyd ee uu ku tagay dalka Mareykanka sanadkii 1962-kii.
“Waynu sii wadi doonnaa wadashaqeynteenna ku aadan dib u habeynta dowladnimada, dhaqaalaha iyo ammaanka dalka si jiilasha mustaqbalka ugu naaloodaan nabad iyo barwaaqo” ayay sheegtay safaaradda Mareykanka.
Previous articleSanduuqa Horumarinta Afrika ee ADF Oo ansixiyay lacago looga jawaabayo COVID-19
Next articleUNESCO oo sheegtay in astaanteeda loo adeegsaday ganacsi sharci darro ah